Yiziphi imisebenzi unogada? Izikhulu, imisebenzi ukusebenza kanye nemithwalo yemfanelo esindayo unogada
Umsebenzi, Zokuphathwa kwemisebenzi
Jobe unogada kuyinto zithandwa namuhla. Futhi zonke ngoba namuhla kuvula izitolo xaxa futhi ezitolo ezinkulu, lapho udinga ezingeni elifanele ukuqinisekisa ukuphepha zombili abasebenzi kanye namakhasimende, kanye izimpahla imali. Ngaphezu kwalokho, imisebenzi onogada njalo ezitshalweni isidingo, amahhovisi ahlukahlukene kamasipala nezinye izinto eziningi. Kufanele kuqashelwe ukuthi ezinye abaqondisi nabaphathi ozama ukulondoloza ngokuphepha, futhi umphumela waba ukuthi ukudebeselela izinsizakalo zangasese unogada noma inkampani yonogada. Nokho, ngokuvamile i-ngemuva kwesikhathi esithile, umbono wabo kushintsha kakhulu. Njengomthetho, kwenzeka emva ambalwa izigameko ezingezinhle. Gwema ukusebenza kanzima kangaka, futhi ukuqinisekisa ukulondeka bento kusiza ukunxenxa okuthiwa nokuvikeleka. Sinikeza namuhla ukuthola ngokuningiliziwe lokho likhona duty unogada.
Uma siphendukela isichazamazwi, ungathola ukuthi lo nogada - lena ndoda Olinda into noma othile. Kodwa umbono wokuthi umsebenzi ukwenza ukuvikelwa iphutha kancane kuphela, ngoba lo msebenzi sihilela imisebenzi kubaluleke kakhulu.
Ngakho, okokuqala, kunoma iyiphi unogada inkampani noma esitolo nokuvikeleka iyona "ubuso" lesikhungo. Phela, isivakashi noma ikhasimende, uya ehhovisi, owokuqala ubona yabalindi. Ngakho-ke, injongo yaso, phakathi kwezinye izinto, ukwakha umbono omuhle iklayenti.
Okwesibili, unogada has ukuqondiswa egumbini babelwe kangcono kunamanye abasebenzi. Phela, uma esiphuthumayo, uyoba nesibopho kuhlengwe izivakashi nabasebenzi.
Okwesithathu, ubungcweti ingaphezu bokusungula, kunokuba ngokomzimba. Ngakho ngokuvamile, njengoba besho, kuphocelela unogada ukusebenzisa i-akhawunti kungekho ngaphezu kwesikhathi esisodwa noma kabili ngonyaka. Ngokwezinga elikhulu umsebenzi abasebenzi kuyehla kube asiqaphile isimo kanye control esiqinile.
Okwesine, unogada kumele abe inkulumo abanekhono ukuxazulula isondela amazwi ingxabano.
Umlando nesenzakalo mkhakha
Ngaphambi kokuwa kweSoviet Union wenziwa bagade amaphoyisa. Kwaze kwaba yilapho sebeshiye ukwamukelwa of 25.05.1988, uMthetho "Ngo Cooperation eU.SSR" kwaqala ukuvela izinhlangano lokuqala wahlanganyela emsebenzini nokuvikeleka. Ngakho, umphenyi bureau wokuqala ngaphansi kwegama "Alex" yabhaliswa eLeningrad ngo-1989. Lapha bonke labo abafisa ukusebenzisa amasevisi onogada abazimele.
Nokho, Ngokusemthethweni, ukuvela mkhakha kwenzeka ngo-1992, lapho mthetho "Ngo umphenyi yangasese nomsebenzi nokuvikeleka eRussia." Namuhla, kulo lonkhe live letfu kunensada izinkampani yangasese yezokuphepha (i-PSC), enganikeza abophiko lwezokuphepha njengoba iklayenti mathupha, futhi inhlangano iyonke.
Lapho befaka isicelo somsebenzi unogada umsebenzi ngamunye kufanele ukujwayelana incazelo umsebenzi futhi asayine ke. Imisebenzi aqaphe at isayithi ngayinye ingase ihluke kancane. Kodwa iningi izimfuneko msebenzi kukhona standard. Ngakho, lo nogada ine imisebenzi elandelayo:
Ubelokhu ukukhonza kusayithi ababelwe uqaphe izimo zokusuka endaweni.
Imibhalo Ihlola emnyango into evikelwe, futhi sihlola okuqukethwe isandla umthwalo ukuba imali kwi endaweni evikelwe.
Izilawuli imishini umgqekezi nomlilo alamu izinhlelo, futhi yabo
senziwa ngokushesha yazisa ikhanda yabalindi.
Detains izakhamuzi abaye benza ukweba noma i- ukulawula-bandwidth oku into evikelwe.
yemfanelo obusebenzayo unogada
yemfanelo Functional zenziwa ngokuqondile umsebenzi ngamunye, kuye ngohlobo lwento evikelwe. Bahlanganisa izinto ezilandelayo:
Unogada kumele ukwazi ukulawula isethi ukufinyelela endaweni evikelwe. Akufanele futhi aziswe mayelana uhlobo maqembu ezisetshenziswa endaweni yemfanelo ayiphathisiwe.
Ngokuhambisana imiyalelo setha isisebenzi kumele uqinisekise semthethweni ukuthekelisa izinto nge kuqashelwe insimu yabo.
Yamukela esitokisini nokulawula abantu enomthwalo wezimali letigcogcwe ngaphambilini kanye zomculo, ukuphepha kanye umlilo alamu izinhlelo efakwe ezakhiweni, okuyinto babegadwe kuye.
Lapho i-alamu evala okuseshwa emnyango futhi ihlinzeka ukuhoxiswa ephephile yezakhamuzi ensimini evikelwe.
Uma kudingekile, ungasebenzisa izinja unogada.
Thina malungu umsebenzi, ngaphezu imisebenzi namalungelo khona. Okokuqala, unelungelo lokuba axhumane ikhanda sezinqumo eziphathelene ehhovisi lakhe. Okwesibili, singacela usizo lobuholi ekusebenziseni imisebenzi yabo esemthethweni.
A isikhulu sezokuphepha zathi unesibopho:
Ukwehluleka ukwenza imisebenzi esemthethweni futhi imisebenzi eziye ebekiwe imiyalelo lapho wenza into wokuvikela.
Noma yimuphi amacala eziye uzibophezele ngesikhathi umsebenzi emsebenzini wakhe.
umonakalo Material, okuyinto kwabangelwa iphutha yabalindi.
Izidingo Jikelele for unogada
Nge ukusabalala mkhakha saqala ukoma izidingo kubantu abafuna ukwakha kule Security Inkampani. On mkhakha futhi manje kufanele sifunde ukuthatha izivivinyo, okuyinto zamukelwa yiBhodi abahloli amaphoyisa Russian. It uyakufakazela ulwazi ezincwadini izicelo, kanye nezinga labo nezibhamu ukuqeqeshwa.
Ukufundisa izakhamizi isitifiketi ekhethekile, uhlobo Analogue we idiploma. isitifiketi ngasinye has uchungechunge kanye nenombolo. It ingatholakala kuphela ngokunikeza madokumende alandelayo:
Isicelo Ukukhishwa idokhumenti.
Irisidi esiqinisekisa nokukhokhwa imali yokubhalisa kwelayisensi entsha.
Umbiko wezokwelapha ngemva ukudlula ikhomishana efanele.
Ikhophi isitifiketi esikhishwe, okufakazela ukudlula ukuqeqeshwa okukhethekile.
Lo mbiko, okufakazela khona ziqu.
zonogada ezizimele imisebenzi unogada musa ihluke kwezinye imisebenzi umsebenzi wabasebenzi abasebenza lezokuphepha. Zonke imiyalelo apelwe ukuphuma kule nomthetho futhi ivunyelwe imithetho yangakini.
Imithwalo yakhe unogada yangasese kanje:
Kumelwe ibhekane njalo ngihlolwa ezifanele. Ngenxa yokuthi isikhulu sezokuphepha zathi zingaqhubekela wadalula ngaphansi kwezimo endaweni evikelwe, kumele sihlale njalo siqaphele impilo yabo ukuze avimbele nesenzakalo kwezifo ezihlukahlukene emsebenzini. Futhi, kufanele yabalindi ihlolwe ukuthi ziyafaneleka yini lochwepheshe ukuthi asebenze lezokuphepha. Ngokuvamile hlola ihilela ikhono lokusebenzisa izibhamu kanye neminye imikhiqizo ezama ukuzivikela.
Oyimfihlo unogada kufanele athobele yonke imibandela yesivumelwano umsebenzi.
Isisebenzi ubophekile ukuba ulandele nezidingo Ukuvikelwa zabasebenzi.
Zonke amacala Guard ebekiwe inkontileka umsebenzi umsebenzi.
Namuhla, cishe wonke endaweni yokudayisa zingatholakala emnyango yabalindi. Imisebenzi esitolo unogada ziyabonisa futhi ukuhambisana nezidingo zokuphepha, okuyinto ezibekwe incazelo umsebenzi. Futhi e imiyalelo ingase ihlanganise imithetho jikelele nokuphepha kwabasebenzi.
Imisebenzi eyinhloko unogada esitolo - ukuqapha engena izakhiwo kanye nemisebenzi ngaphakathi it bonke izivakashi. Nazi ezinye umehluko wemisindo nemiqondo yamagama. Ngakolunye uhlangothi, isisebenzi sikaHulumeni kufanele iqaphe ukuziphatha amakhasimende ezingase zivele, futhi uma beziphatha ngokweyisa, ungavumeli ekamelweni. Ngakolunye - yabalindi uye angenalungelo lokukuthola ungavumeli abantu endaweni yomphakathi. Uma Nokho, isikhulu sezokuphepha zathi ukuvumele abantu singenele faka, kumele kube Ukulalelisisa kakhulu ukuziphatha kwabo.
Libuye yisibopho unogada esitolo ihlanganisa zokuxhumana ezifanele namakhasimende uma kwenzeka isimo ingxabano. A isikhulu sezokuphepha zathi akufanele babuze ithoni ukuba bangahloniphi noma usebenzise amandla ngokumelene iklayenti. Kungaba ukuhlukanisa ukungqubuzana kwezinhloso umthengi kuphela uma isaziso usongo ukuphila nempilo nezinye izivakashi kanye nokugcina abasebenzi.
Ukuze usebenze enkonzweni ezokuphepha kule esitolo kuyinkimbinkimbi kancane kuka esitolo. Lapha, izivakashi nethuba ukweba eshalofini umkhiqizo othize. Kuyaphawuleka ukuthi umqaphi alinalo ilungelo sezifuna ukuba umsolwa nokweba umthengi ukukhombisa okuqukethwe esikhwameni sakhe noma ephaketheni. Futhi emnyango isisebenzi ngeke zidinga ukuthi ukushiya izikhwama nokhunye endaweni okugcinwa kuyo izimpahla ekhethekile. Imisebenzi unogada esitolo kuphela ukubamba umsolwa uma nokweba emaphoyiseni ukufika. Angaba ubambe umthengi emagcekeni, kodwa uma engavumelani ke isikhulu sezokuphepha zathi angenalungelo lokukuthola ukumphoqa. Ngeshwa, lesi simo ngale ndlela kuvamile futhi luqhutshwa ezinkulu kuphela ngoba izakhamuzi akuzona abawazi amalungelo abo.
6, ukudedelwa kusukela unogada
Noma yimuphi isikhulu sezokuphepha zathi, ngemuva kokuthola ukuqeqeshwa nokutadisha, uthola khulula. Wabo ezintathu: unogada we 4th, 5th futhi isikhundla 6th. Hlola futhi kabusha ukuqeqeshwa ukuqeqeshwa senzeka 1 isikhathi eminyakeni 5. Imfuneko ukuze 6th (eliphakeme) osenyameni kuba phambi amakhono umsebenzi isikhathi "isigaba lesihlanu" okungenani isikhathi esingangonyaka. Esikhathini imisebenzi unogada osenyameni 6 kuhlanganisa yonke nesimo esifana ngesikhathi esithweni 4th futhi 5th. Ngakho, umsebenzi kufanele bavikele izakhiwo kanye indawo ephathiswe bona, futhi impahla phakathi zokuthutha, uma linikezwa unogada. imisebenzi Guard 6 sigaba kwale mibandela elandelayo: uma ingozi noma ukweba, isisebenzi singakwazi ukusebenzisa izimvume ezisetshenziswa umphakathi noma isevisi izikhali.
Namuhla, cishe wonke esitolo Sokubambisana ingatholakala engosini ethi uphume isilawuli. It yenza umsebenzi oyisisekelo ofanayo yabalindi, kodwa ngeziphambeko okuncane.
Izibopho yabalindi Comptroller:
Hlola ku isheke empeleni badabula imikhiqizo Pos. Ukuhlolwa kungaba kokubili sokukhohlwa ephelele. Kuyadingeka ukuba uhlole isisindo, intengo, igama, emaphaketheni, njll
Isilawuli kumele ukwazi imali yokubhalisa imishini futhi wonke umsebenzi wasebhange.
Ngokugcwele nangokunembile ukuqonda amasofutiwe asetshenziswa ukuphatha nezimali eziwukheshi.
Ukuqinisekisa ukuphepha izimpahla ephathiswe bona, futhi ukusiza ngokudlulisela futhi emaphaketheni.
Control nokucindezela nesenzakalo ukweba ukweba.
Ukuze ukwazi wonke uhla izimpahla ithengiswe esitolo bese kubekwa uvule amafasitela.
Esimeni ukungqubuzana izimo ngenxa kulimaze impahla umthengi ukwazisa abaphathi.
Bagcine ihlanzekile futhi icocekile umsebenzi endaweni kanye ukulandela ukuphepha elicacisiwe abayizikwele asho okususiwe emthethweni efanele.
Have ngendlela ehloniphekile futhi ezifanele, kanye lapho namakhasimende kanjani ukubonisa inhlonipho, kakhulu.
Eminyakeni yamuva, inani elandayo lezisebenzi izikhungo zemfundo ezweni lethu baqala ukuvela abasebenzi nokuvikeleka. On emihlanganweni othisha 'futhi imihlangano umzali lokunquma ukuthi uyahlala yini ukufaka amathuluzi lokuvikeleka ukuzibandakanya we unogada yangasese. Ngakho, emhlabeni azungezwe lesikole noma esinye isikhungo semfundo ukukhwezwa CCTV kanye alamu umgqekezi. Isisebenzi ukuphepha esikoleni , kukhona izibopho jikelele yabalindi, okuyinto ezibekwe iziqondiso nemithetho efanele. Bekanye nabo, isigungu samadoda othisha ', eliholwa umqondisi wesikole kuyinto iziqondiso zokuphepha ezengeziwe, okuyinto ngemvume unogada ngasekungeneni.
imisebenzi aqaphe isikole:
endaweni ephephile lesikhungo phezu kwalo lonke usuku.
Ukuqalisa umbuso Iphemithi abafundi nothisha esikoleni, kanye nezinye izivakashi.
Qapha impahla yesikole.
Londoloza impilo imishini isivele ifakiwe.
Kutitfokotisa kuphawula ngalokufanele nokuqhutshwa umlilo nokuvikeleka alamu.
Athobele lo myalo emagcekeni esikole, kanye isakhiwo esikoleni. Ngakho, ngokwesibonelo, umthwalo walo ukuvimbela izimpi phakathi abafundi.
Wena uthanda ukusebenza ngedwa kusukela ngokuhlanganyela? Nakani lezi ubuchwepheshe
Bondar - ubuthishela ukuthi uye waba yingxenye yomlando
Uyini umsebenzi manje ethandwa?
Ufuna uthanda osebenza nabo? 6 Lezi namaqhinga kuzokusiza
Ingabe uyazi ukuthi kungakanani ummeli uhola eRussia?
I ukuthungela module, njengengxenye uhlelo ukuthungela
Mangaki amantombazane kufanele nesisindo engu-13? Yini okufanele ibe ukukhula kwabo?
Indlela hlola ithikithi lakho? amathikithi Ukubhukha ngaphandle lokukhokha: Izibuyekezo
Rafflesia Arnoldi futhi Amorphophallus Titanium - imbali enkulu kunazo zonke emhlabeni
Unforgettable cowboy party ekhaya
Polyclinic № 147 (eMoscow, i-Molodogvardeyskaya Str.): Irekhodi lezokwelapha, ukubuyekezwa
Umlando inkondlo mayelana nendlela abantu ababehlala ehlakazekile nge-Street Pool
Le filimu "uYise Soldier": abalingisi, izindima, sakhiwo sendzaba kanye ezithakazelisayo amaqiniso
Ukuphelelwa ngumoya: izimpawu, izimbangela, izenzo
"Napoleon" kuso: ikhekhe recipe. Ikhekhe "Napoleon", kuphekwe epanini ukuthosa (isithombe)
Yini ukupheka ukhilimu "Napoleon"? Indlela ku inothi